Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): March 2011
USA Mahkrum Madup Daw myi
at 3/30/2011 10:31:00 AM
USA လူမှုဖူလုံရေး ပေါ်လစီ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ နှစ်ကုန်ပြီးလို့ ဇန်န၀ါရီလလောက်ကနေ မတ်လ
ကုန်လောက်ထိ ကာလဟာ လူတော်တော်များများအတွက် ရင်ခုန်နေရတဲ့
အချိန်တွေဆို မမှားလောက်ပါဘူး၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီအချိန်မှာ အလုပ်
လုပ်နေတဲ့ လူတိုင်း အခွန်ငွေအတွက် တွက်ချက်ရပါတယ်၊ အစိုးရက တရား
၀င် လိုင်စင်ချပေးထားတဲ့ အခွန်တွက်ချက်ရာ ပုဂ္ဂိုလိက ဌာနတွေမှာ သွားရောက်
တွက်ချက်ရပါတယ်၊ မသွားလို့မရပါဘူး ၊ အမေရိကားမှာ အခွန်ရှောင်ခြင်း
ဟာကြီးစွာသော ဥပဒေပါ၊ ( နိုင်ငံကိုက အခွန်အကောက်ပေါ်မှာ လုံးလုံး ရပ်
တည်နေရတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ အခွန်ဟာ သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါ )။
အဲဒီလိုသွားရောက်တွက်ချက်ရာမှာ မိမိ တနှစ်တာအလုပ်လုပ်ခဲ့လို့ရတဲ့ဝင်ငွေ၊
မိမိမိသားစုရပ်တည်မှု (မိသားစုဝင် ဘယ်နှစ်ဦးရှိလည်း၊ ဘယ်နှစ်ယောက် အလုပ်
လုပ်နိုင်သလဲ၊ ကလေးငယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ မှီခိုဘယ် နှစ်ယောက်ရှိလည်း)
စတာတွေအပါဝင် သတင်းအချက်လက်အခိုင်မာတွေကိုစုစည်းပြီး အထက်
ဖော်ပြပါ ဌာနတွေက တွက်ချက်ပေးပါတယ်။ ၀င်ငွေနည်းပြီး မိသားစုဝင်
များပြားတဲ့ (အထူးသဖြင့် ကလေးငယ် တွေများတဲ့ မိသားစု ) များအတွက်
ကတော့ အခွန်ပြန်အမ်းငွေ (tax refund) ပြန်ရကြပါတယ်။ ကျနော်
သိရသလောက် တနှစ်ကို ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ သုံးသောင်းလောက် ၀င်ပြီး
ကလေးငယ်ကလည်း နှစ်ယောက်ထက် အထက်မှာရှိတဲ့ မိသားစုများဆို
အခွန်ပြန်အမ်းငွေ တစ်သောင်းနဲ့အထက်ရကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်နယ်
တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့လေ၊ တယောက်ထဲ သမား လူလွတ်တွေနဲ့
ကလေးငယ်မရှိတဲ့ မိသားစုဝင်များအတွက်ကတော့ ရခဲ့လျှင်လည်း
နည်းနည်းလေးပဲရပြီး တချို့ဆိုသတ်မှတ်ဝင်ငွေကျော်သွားလို့ အခွန်
Three KIO officers arrested in Northern Burma
at 3/29/2011 11:04:00 AM
Three officers of the Kachin Independence Organization (KIO) have been arrested in two different places in Burma’s northern Kachin State by the Burmese Army, KIO sources said.
All three officers are working in the Department of General Administration (DGA), the civil administration department of the KIO,aKIO official said on the condition of anonymity today.
Japan N nang nawn sumla yu ga
at 3/28/2011 12:02:00 PM
Ndai link kaw e
ladat myu myi hku mai yu nga ai chyam yu ga Click
Japan Sunami Video
at 3/21/2011 11:18:00 AM
at 3/18/2011 11:41:00 AM
ဂျပန်နိုင်ငံမှဇူနာမီလှိုင်းကြောင့်လူပေါင်းမြှောက်များစွာသေဆုံးပြီးနျူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖို ပေါက်ကွဲမှူ့ ကြောင့် ရေဒီယို သတ္တိကြွများသည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အတွင်းပြန့်နှံ့ သွားပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ မိုးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ရွာသွန်း ဖွယ်နိုင်ရာရှိ့ကြောင်း (BBC)မှ တာဝန်ရှိ့သူ မစန္ဒာ ကပြောကြားသွားပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်းလည်း မိုး ရွာသွန်းမှူ့များ ဖြစ်နေကြောင်းကို ရန်ကုန်မှ တာဝန်ရှိ့သူတစ်ဦး ကပြောကြားပါတယ်။ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် အရ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ့ ရန်ကုန်၊ ပြင်ဦးလွင်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်း ဒေသနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်ထို မြို့များတွင်လည်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ကြောင်း မိုးလေ၀သငှာနမှ အစီရင်ခံ တင်ပြထားပါတယ်။ မတ်လ (19) ရက် 2011မှာ ကျရောက်မည့်လ နှင့်ကမ္ဘာတစ်ထပ်ထည်း ကျ ရောက်ပြီး စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိ့ရကြောင်းကို ကမ္ဘာသိပံ္ပံပညာရှင်များက ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဆူနာမီငလျှင်ဒဏ်ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာထိုလနှင့်နေတစ်ထပ်ထည်း ကျရောက်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အန္တရာယ်လို့ မသတ်မှတ်ထားကြောင်းကိုလည်းhttp://news.cnet.com/8301-17852_3-20042550-71.html မှတင်ပြ ထားပါတယ်။...ာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကိုကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှသိပံ္ပံပညာရှင်များကငလျှင်ချက်သည် မြန်မာပြည်ကိုဗဟိုပြုနေကြောင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှ ငလျှင်တိုင်းထွာချက်ဗေဒပ ညာရှင် အဲလ်ဒေါ့ခ်ျမတ်(စ်)(ALDORMATCH)က အခုလိုပြောကြားသွားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဖြစ် သော ခရမ်းမြို့နှင့်ပဲခူးမြို့၏ အောက်ခြေတွင် ပျက်ရွေ့ကြောရှိ့နေသဖြင့် ငလျှင်(Earthquake) ကြောင်းများ ဖြစ်လာဖွယ်ရာရှိ့ကြောင်းကို CCTV သတင်းငှာန သို့ပြောကြားသွားပါတယ်။ တကယ်လို့သာထိုငလျှင်ကြာင်း သည်ကြီးထွားလာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိ့သဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ကိုပါ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အားလုံး သတိနဲ့နေဖို့ကိုလည်း NHK မှကြော်ငြာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ယနေ့မနက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့သို့ တောင်ကြီးမြို့မှ အမည်မ ဖော်လိုသူ သိပံ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်သည် ၁၅ရက်နေ့မှရွာသွန်းသောမိုးရေကို ယခင်ရာသီဥတုသဘာဝကြောင့်ရွာတဲ့မိုးရေနဲ့ယှဉ်တွဲစစ်ဆေးချက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာထိုမိုးရေထည်းတွင်အက်စစ်မှုံများပါဝင်နေကြောင်းကို အတည်ပြုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုသပံ္ပံပညာရှင်ပြောကြားသွားချက်အရ မိုးရေထည်းတွင် အဖြူမှုံတွေပါပြီး သဘာဝမိုးရေမှာလူအသားထည်းကိုစိမ့်ဝင်မသွားပဲ ယခုအချိန်အခါမဟုတ်ရွာသွန်းသောမိုးရေ မှာအသားထည်းကိုချက်ခြင်းစိမ့်ဝင်သွားပြီ အဖြူရောင်အမှုံလေးသာ ကျန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် အချိန်နည်းနည်းကြာလာတာနဲ့အမျှထိုမိုးရေထိထားသော အသားအရေမှာ ယားယံခြင်း၊ စပ်ဖြင်းစပ်ဖြင်းနဲ့ အကောင်ကိုက်သလိုခံစားနေရခြင်းတို့ ကြုံလာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အားလုံးကိုမှာချင်တာကတော့ မိုးရေထည်းမှာ ကလေးငယ်များနဲ့ လူကြီးများမသွားလာသင့်ကြောင့် သွားလာမည်ဆိုပါကလည်း မိုးကာ၊ ထီး၊ နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံစေမည့်အ၀တ်အစားများဝတ်ဆင်ကြပါရန်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုအထူးသတိပြုဖို့မှာ ကြားသွားပါ တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြို့မှာလည်း မိုးရွာသွန်းမှူ့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရာ တောင်ကြီးမှ သိပံ္ပံပညာရှင်ပြော ကြားချက်နှင့်တစ်ထေရာထည်းတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ထိုပြသနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ အဖြေရှာနေကြောင်း ထိုင်းဆရာဝန်များကပြောကြားသွားပါတယ်။ ထိုနည်းတူမိုးကို ကယ်လ်လီဖိုးနီးရားမှာ လည်း ရွာသွန်းကြောင်း ကို ကယ်လ်လီဖိုးနီးယားမှသိပံပညာရှင်မစ်စတာဒီကော့်ခ့်ဝတ်(ပ်) (Mr.DICOUSWOSH) ကပြောကြားသွားပါသည်။ ထို မိုးရေထည်းတွင်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဘက်တီးရီးယားများ လည်း ပါဝင်နေသည် ဟုဆိုပါ သည်။ အစစအရာရာ သတိထားဖို့ အားလုံးကို မှာကြားချင်ပါတယ်....ကျေးဇူးတင် ရှိ့ပါတယ်...
Ndai bog kaw na re
ဂျပန်ရောက် အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေကို ဘေးကင်းရာ ပြောင်းရွှေ့မှု စတင်
at 3/18/2011 10:42:00 AM
ဂျပန်ရောက် အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေကို ဘေးကင်းရာ ပြောင်းရွှေ့မှု စတင် click
Los Angeles အနီး ဆိပ်ကမ်းတွင်သန်းပေါင်းများစွာသောငါးများသေဆုံး
at 3/18/2011 10:34:00 AM
Los Angeles အနီး ဆိပ်ကမ်းတွင်သန်းပေါင်းများစွာသောငါးများသေဆုံး Click
ဂျပန်ရောက် အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေကို ဘေးကင်းရာ ပြေ...
Los Angeles အနီး ဆိပ်ကမ်းတွင်သန်းပေါင်းများစွာသောင...